OweNatal Rich Boyz ufuna ukuqhubeka nokuhlohla amagoli kwiPremiership - Impempe
May 22, 2022 Impempe.com
USakhile Hlongwa (kwesokudla)
USakhile Hlongwa, weRichards Bay FC, uthi ufuna ukuqhubeka nokuhlohla amagoli njengoba iqembu selizodlala kwiDStv Premiership ngesizini ezayo.
INatal Rich Boyz ibe ngompetha beGladAfrica Championship, yaphakamisa indebe ngesonto eledlule, eKing Zwelithini Stadium, eMlaza. UHlongwa ube nesandla kakhulu empumelelweni yeqembu ngokushaya amagoli angu-14.
“Ngesikhathi kuqala isizini ngizibekele ukuthi ngifuna ukuqeda kuyimina ohamba phambili ngamagoli kwiligi,” kusho uHlongwa.
“Empeleni bengifuna ukuba namagoli angu-15 kodwa ngangakwazi ukwenza lokho ngathola angu-14. Nokho nalokho ngijabule kakhulu ngakho.”
Lo mgadli uveze ukuthi uthole ukwesekwa okukhulu ozakwabo ukuze aqhubeke nokuhlohla amagoli.
“Ozakwethu bebengisiza kakhulu ukuze ngifike kula magoli angu-14. Bebehlezi bengiphusha uma siziqeqesha bengiphasela ukuthi ngishaye amagoli. Bebenza izinto ngendlela evuna le engidlala ngayo.
“Ngicabanga ukuthi kulokhu engikwenzile kule sizini, kumele ngenze okuphindwe kabili kwiDStv Premiership. Kumele ngisebenze ngokuzikhandla, uma lijima iqembu ngiqhubeke nokwenza okungaphezulu uma sengingedwa.
“Ngicabanga ukuthi ukwenza kanjalo kuzongisiza kakhulu ukuthi ngifinyelele kula magoli engiwafunayo.”
Previous Previous post: UKerr uthembisa ukuyidiliza ebhasini elibheke ehlathini iSwallows
Next Next post: Siphelile isikhathi sokuncengana nabangafuni ukuzinikela: oweChiefs